काँग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षको घरमै चोरीको बिजुली : जनताले के सिक्ने ? – Karnalikhabar
काँग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षको घरमै चोरीको बिजुली : जनताले के सिक्ने ?
काठमाडौ । समाजलाई सही मार्गमा लिनुपर्ने व्यक्ति नै चोरीमा संलग्न भए पछि समाज कता जान्छ रु यो विषय किन उठाएको भने काभ्रेको पनौती नगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष विद्यूत चोरीमा संलग्न भएको खुल्न आएको छ ।
नेपाल विद्यूत प्राविधिकरण बनेपा शाखाको टोलीले वडाध्यक्ष तारामान लामाको घरमा चोरी गरेको विद्यूतबाट सञ्चालन गरिरहेको सामग्री बरामद गरेको जनाएको छ । उहाँको घरबाट फ्रिज र मिटरबक्स निय्रन्त्रणमा लिएको प्राधिकरणका इन्जिनियर नरेश मानन्धरले जानकारी दिनुभयो । उता, वडाअध्यक्षले भने आफ्नो घरमा प्राविधिकरणको टोली पुगेको बारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनु भएको छ ।
आफुले विद्युक्त प्रयोग गरेको तर चोरीको हो वा होईन् त्यो ख्याल नगरेको प्रतिकृया जनाउँनु भएको छ । गाउँमा विद्यूत चुहावट भएको गोप्य सुचनाको आधारमा प्राविधिकरणको टोली वडा नम्बर ११ पुगेको थियो । उहाँ नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ । वडाध्यक्ष लामाले धेरै पहिलो देखि विद्यूत चोरी गरेर घरमा विद्यूत बाल्दै आएको हुन सक्ने अधिकारीहरुले अनुमान गरेका छन् ।
सर्भिस केबल मिटरबक्समा नजोडि उहाँले सिधैँ बत्ती बाल्दै आएको भेटिएको हो । उहाँको परिवारले भने भूकम्पपछि मात्रै यसरी बत्ती बालेको दाबी गरेका छ । ‘हामीले भूकम्पछि पैसा तिरेको बील देखाउन भन्यौ,तर उहाँहरुले देखाउन सक्नुभएन् । त्यसैले चोरी धेरै अघिदेखि भएको हुन्छ सक्छ, हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’
यदि विद्यूत चोरी गरेको पुष्टि भएमा ३५ दिनभित्र विद्यूत प्राविधिरणमा सबै बक्यौता नतिरे ६ महिनासम्म कैद हुने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ । यसरी जन प्रतिनिधि नै चोरीमा संलग्न भएमा सर्व साधारण जनताले के गर्ने ? स्थानीयले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
अघिल्लो - नेपाली राजनीतिमा परिवारवाद : कम्युनिष्टदेखि काँग्रेससम्म, छोरादेखि नातीसम्म
पाथीभरामा एकै दिन ९ हजार दर्शनार्थी - पछिल्लो
राष्ट्रिय साधना म्युजिक अवार्ड २०७६को आवेदन खुल्ला
साइकलमा दूध बेच्न आएका वृद्धलाई भारतीय नम्बरको स्कार्पियोले ठक्कर दिँदा घाइते